“clinique wheelchair”: Hiditra amin’ny andiany faharoa ny fiofanana - ewa.mg
“clinique wheelchair”: Hiditra amin’ny andiany faharoa ny fiofanana
News - “clinique wheelchair”: Hiditra amin’ny andiany faharoa ny fiofanana
Teknisianina miisa dimy avy amin’ny
Federasiona malagasy ny handisport no niatrika fiofanana ho
mpitsara ho an’ny basikety ambony seza “fauteuil” na ny “clinique
Wheelchair”, andiany voalohany, ny faran’ny volana aogositra teo.
Efa hoavy kosa ny andiany faharoa amin’ity fiofanana ity, hiarahana
amin’ny federasiona malagasy ny basikety. Raha ny fanazavana, tsy
mbola fantatra mazava ny daty, raha ny angom-baovao voaray farany
dia tokony ho amin’ity volana septambra ity ny hanaovana izany.
Eo amin’ity taranja ity hatrany,
nambaran’ny Tale teknika nasionaly fa mbola hisy ny fivoriana
hataon’ny mpikambana anivon’ny Federasiona malagasy ny handisport,
hanapahana izay fomba hamerenana amin’ny laoniny ny
fampandehanan-draharaha sy ny fanenjehana ny fandaharan’asa tokony
ho natao kanefa tsy tanteraka noho ny tsimokaretina Coronavirus.
Hisy ny tatitra hatao, aorian’io fivoriana io, raha ny fanazavana
hatrany ary ezahina ny tsy maintsy hisian’ny hetsika mialoha ny
hanakatonana ny taom-pilalaovana 2020.
L’article “clinique wheelchair”: Hiditra amin’ny andiany faharoa ny fiofanana a été récupéré chez Newsmada.
News - Politique - Santé - News Mada
Tsimbazaza : 25 ireo mpiasa sy depiote tratran’ny covid-19
Miisa 25 ireo solombavambahoaka sy mpiasan’ny Antenimieram-pirenena nifindran’ny covid-19. Miisa 11 amin’ireo ny depiote, ara­ka ny nambaran’ny filoham-pirenena ny alahady teo ary mpiasa kosa ny ambiny amin’izany. Nialohavan’ny fitiliana natao tamin’ireo mpiasa rehetra 400 teny amin’ny CCI Ivato izany, nialoha ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana farany teo. Efa nisy koa anefa ny namoy ny ainy ka anisan’izany ny depioten’i Mo­rom­be, Rakotomalala Lu­cien. Teo koa ny sitrana, anisan’izany ny depioten’i Vohi­peno, i Tsabotokay Honoré. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny filohan’ny Ante­nimierampirenena, Raza­na­ma­hasoa Christine, ny hampihenana faran’ny azo atao ny isan’ny mpiasa mifamezivezy eny an-toerana amin’ny fanatanterahana asa. Amin’ izay farafahakeliny sisa ny asa atao. Atao koa ny fanondrahana ranom-panafody ny eny an-toerana, ary efa misy mpitsabo mandray an-tanana ny marary. Miaraka amin’ny fitaovana izay andrasana amin’ny fitondram-panjakana izy ireo amin’izany.R. Nd.L’article Tsimbazaza : 25 ireo mpiasa sy depiote tratran’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
L’ambassadeur russe Stanislav Anvarovich Akhmedov quittera le pays après avoir passé sept ans à la tête de l’ambassade russe. Il a ainsi commencé les visites de courtoisie auprès des autorités du pays avant de quitter définitivement Madagascar. Hier, il a rendu visite au président du Sénat, Rivo Rakotovao, pour faire ses adieux. Les deux parties ont échangé sur les fructueuses relations entre les deux pays, surtout dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus au pays. Pendant le régime Hery Rajaonarimampianina, où la famille politique de l’actuel président du Sénat a été encore majoritaire au pouvoir, la présence russe au pays s’est développée significativement, dans le domaine militaire et économique. Des opérateurs russes ont investi dans l’exploitation du gisement de chrome en partenariat avec la société d’Etat Kraoma. Dans le domaine militaire, la formation de cadres ainsi que la dotation en matériels de l’armée malgache ont fait partie des axes de la coopération conclue entre les deux pays. Rija R. L’article Diplomatie : Le russe Stanislav Akhmedov fait ses adieux à Rivo Rakotovao est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Diplomatie : Le russe Stanislav Akhmedov fait ses adieux à Rivo Rakotovao a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fandaharanasa “Fihariana”: hahazoana famatsiam-bola 1 hatramin’ny 200 tapitrisa Ar
Fandaharanasa “Fihariana” : famatsiam-bola avy amin’ny fitondram-panjakana hanohanana ny tanora. Nitondra izany fandaharanasa izany ny filoha Rajaoelina, ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny Carlton, ho fantatry ny tanora rehetra te hiditra amin’ny fandraharahana. Hahazoana famatsiam-bola 1 tapitrisa ariary hatramin’ny 200 tapitrisa ariary izy io, miankina amin’ny tetikasa aroso hita fa matotra. Ho an’ny 18 hatramin’ny 58 taona manerana ny Nosy, namolavola hevitra momba ny fihariana afaka mametraka izany any amin‘ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria misy azy avy.Inona avy ireo singa hamaritana ny tetikasa ?200 miliara ariary ny vola atokana ho amin’izany “Fihariana” izany avy amin’ny Sonapar (Société nationale de participations), ny fanjakana ny tompon’antoka, ary ny banky BNI sy ny BOA no mpampindrana amina zanabola ambany (?). Karazana tetikasa rehetra : fambolena sy fiompiana, indostria, famokarana herinaratra, sns… afaka mindrana amin’ity “Fihariana” ity. Mivoaka ao anatin’ny 15 andro ny vola, raha hita azo antoka ny tetikasa. Inona avy ireo singa hamaritana ny tetikasa ary iza no mijery azy, ireo banky ireo sa ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria ?Vahaolana iray hanampian’ny fanjakana ny tanora tonga eo amin’ny sehatry ny asa, mahatratra efatra hetsy hatramin’ny dimy hetsy isan-taona, ny “Fihariana”. Olana ho azy ireo anefa ny tsy fananana asa ka zary vesatra ho an’ny firenena sy miteraka olana isan-karazany any amin’ny fiarahamonina.Mampanahy ny “Kiantranoantrano” Mba hananan’ny tanora toe-tsaina hamorona asa ho fampandrosoana ny “Fihariana” fa tsy miandry asa. Tafiditra ao anatin’ny politika ankapobeny ny fitondram-panjakana rahateo izany. Koa nampirisika ny tanora ny filoha Rajoelina, hamorona ny tetikasany, hiaro ny zava-bitany, sy ny fanavaozana hoentin’izy ireo. Ny tena mampanahy amin’ny tolotra toy izao ny “Kiantranoantrano”, ka izay tiana homena ihany no mahazo. Iza no afaka manome toky ny tsy hisian’izay endrika kolikoly izay ? R.MathieuL’article Fandaharanasa “Fihariana”: hahazoana famatsiam-bola 1 hatramin’ny 200 tapitrisa Ar a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Filaharana Fifa: very toerana iray ny Barea de Madagascar
Namoaka ny filaharan’ireo ekipam-pirenena mandrafitra azy ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa), omaly alakamisy 17 septambra. Very toerana iray ny Barea de Madagascar, tamin’izany. Raha teo amin’ny laharana faha-91, roa volana lasa izay, lasa faha-92 ankehitriny. Manana isa 1 267 ny ekipam-pirenena malagasy, amin’izany. Na eo aza ity fihemorana kely ity, mbola tafiditra ao anatin’ny “Top 100” hatrany ny Barea de Madagascar. Tsy nihetsika kosa fa mbola mijanona eo amin’ny laharana faha-21 hatrany kosa ny Malagasy eo amin’ny filaharan’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf). Marihina fa mbola mitarika eto Afrika ny Lionan’i Teranga avy any Sénégal, tafiditra “Top 20 mondial”, arahin’i Tonizia ary fahatelo ry zareo Nizerianina. Faha-11 kosa ny Etalons’n’i Borkina Faso, hifandona amin’ny Barea de Madagascar eo amin’ny lalao firahalahiana hatao any Lisbonne, Portugal. Faha-12 ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, mpifanandrina mivantana amin’i Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny “Can 2021”.Mbola ry zareo Belzika hatrany aloha ny voalohany eran-tany, manana isa 1 773. Faharoa ny Frantsay, nahazo isa 1 744 ary fahatelo i Brezila, manana isa 1 712. Fahefatra ny Anglisy arahin’i Portugal. Any amin’ny faha-14 ry zareo Alemà sy ny Mannschaft. Mbola i Saint Marin hatrany no mitana ny laharana farany.Marihina fa ny tsy fisian’ny lalao vokatry ny Covid-19 no tsy nampisy fiovana firy ny filaharana, tamin’ity. Tompondaka L’article Kitra – Filaharana Fifa: very toerana iray ny Barea de Madagascar a été récupéré chez Newsmada.